स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु , अलैंची खेती गर्न सिकाउँछु भन्न मिल्दैन नि ? डा. सुनील शर्मा (नेका उम्मेद्वार ,मोरङ ३ ,प्रतिनिधि सभा ) | www.aagopati.com Websoft University
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु , अलैंची खेती गर्न सिकाउँछु भन्न मिल्दैन नि ? डा. सुनील शर्मा (नेका उम्मेद्वार ,मोरङ ३ ,प्रतिनिधि सभा )
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले मोरङ क्षेत्र नं. ३ यतिबेला चर्चामा छ । नेपाली कांग्रेसले डा. सुनील शर्मालाई उम्मेद्वार बनाएपछि बाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकाल चुनाबमा पराजय ब्योहोर्नु पर्ने डरमा छन् । भने कांग्रेस आक्रामण प्रचार शैलीम उत्रिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको अंक गणितमा झण्डै २१ हजार मतान्तरले पछि रहेको कांग्रेस जीत नजिक पुगेको कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । निर्वाचन कै सेरोफेरोमा डा. शर्मासँग कुराकानीको सार ।
– प्रचार प्रसार कसरी भइरहेको छ ?
० हामी अहिले मतदाताको घर घरमा पुगेर मत मागिरहेका छौं । ठूलो भुगोल छ, मतदाता धेरै छन् । तसर्थ , बिहान ७ बजे देखि राति ११ बजे सम्म म मतदाता सँगै छु । उहाँहरूको आशिर्वाद लिइरहको छु । सबै मतदाताले भोट दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरिहनु भएको छ ।
–चुनाब जित्नेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
० म शतप्रतिशत ढुक्क छु । मैले उधारोमा काम गरेको छैन । हरेकका समस्या ‘स्पोट’मा सम्बोधन गरेको छु । कम्युनिष्ट जस्तो वर्षौं देखि जनतालाई ढाँटेर काम गर्दिन । सक्ने काम ठाउँको ठाउँ गरेको छु ।नसक्ने काम योजना गत रुपमा गर्ने भनेको छु ।
–त्यस्तो के काम गर्नु भयो नि ठाउँको ठाउँ , भन्न मिल्छ ?
० किन नमिल्ने ,सोमबार पथरी शनिश्चरे १० मा मत माग्दै हामी संगम चौकमा पुगेका थियौं । त्यहाँ पवित्रा कार्की नामकी एक किशोरी शरीरमा रोग पालेर बसेकी रहेछिन ।उनले विगतमा गरीवीका कारण उपचार नपाउँदा जीवन देखि निरास भएर मृत्युको बाटो रोज्ने प्रयास पनि गरेकी रहिछिन । मैले तत्काल उनलाई उपचारको प्रबन्ध मिलाएको छु । त्यति मात्र होइन ,सोही गाउँका १६ वर्षीय रोमन माझी प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहदा रहेछन्, उनलाई पनि उनले ईच्छाएको प्राविधिक विषय निशुल्क पढ्ने ब्यवस्था मिलाई दिए ।यि त उदाहरण मात्र हुन , यस्ता सयौं पवित्रा र सयौं रोमनलाई स्वरोजगारको प्रबन्ध मिलाउने मेरो योजना छ ।
–तपाईले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष जोड दिइ रहनु भएको छ नि किन ?
०हेर्नुस, म स्वास्थ्य क्षेत्रको मानिस । जसले जे जानेको छ , बुझेको त्यसले त्यही गर्ने हो । निरोगी भए ,सबै कुरा सम्भव छ , होइन भने घर खेत,लैनो गाई,गोठका हल गोरु बेचेर , गहना बन्दकी राखेर उपचार गर्नुपर्छ । स्वस्थ्य भए रोजगारीमा जान सक्छ , तनाव मुक्त भएर काम गर्न सक्छ । अर्को कुरा प्राविधिक शिक्षा दिन सके कोही पनि बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन , भनिन्छ नि –जीवन बाँच्नका लागि एक छाक खाना होइन, जीवन भर बाँच्न सिकाउने बल्छी दिनु ।’प्रविधि युक्त सीप भए मान्छेले बेरोजगार भएर भोकै बस्नु पर्दैन । र्मैले अलैंची खेती गर्न सिकाउने कुरा आएन नि , मलाई त्यस्को ज्ञान छैन ।
–अरु एजेण्डा के छन ?
०मैले बारम्वार भनिरहेको छु । तीन वर्ष भित्र पथरीशनिश्चरे,कानेपोखरी, सुन्दरहरैचा र बेलबारीमा २५÷२५ सैयाको अस्पताल सरकारी स्तरबाट खोलिने छ । यदी त्यो सम्भव भएन भने नोवेल अस्पतालको शाखा खोलेर यस क्षेत्र उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्छु । निर्वाचन क्षेत्र भित्रका सबै मतदाताको निशुल्क जीवन बीमाको ब्यवस्था मिलाउने छु । सरकारले ५० हजार सम्मको उपचार बीमा निशुल्क भनेको छ । मैले अरु ५० हजार थप गरेर १ लाख पु्¥याउँने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छु । मैले आज पनि सयौं विपन्न परिवारका छात्र छात्रालाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेको छु । हिजो मैले देशै भरिका विपन्नहरूलाई निशुल्क पढाएको थिएँ । अब म अलि बढी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छु ।
–स्वास्थ्य र शिक्षामा तपाई मोरङ–३ मा केन्द्रीत हुनुहुन्छ नि चुनाव जित्न हो ?
० पथरीशनिश्चरेको ६ नं वडा मोरङ २ मा पर्छ । त्यहाँका दिनेश हस्दा अहिले एमवीवीएस पढ्दै छन् । गुल्मी, रुकुम,रोल्पा, हुम्ला कहाँ पर्छ ,मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ???शिसवनी जहदा,लखन्तरी, कटहरी मोरङको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । मैले त्यस क्षेत्रका सयौलाई निशुल्क पढाएको छु । चुनाव केन्द्रित हुने भए , दुई तीन महिना अघि यो अभियान सुरु हुन्थ्यो । तर मैले ७ वर्ष यता विपन्नका छोरा छोरीलाई निशुल्क पढाइरहेको छु । मानव हीतका लागि काम गरेको छु । प्रचारका लागि होइन । सुनील शर्माले गरेको सामाजिक कामबाट आत्तिएकाहरुले अनेक ‘फण्डा’ गरेका छन, आरोप लगाएका छन् । तर म त्यसतर्फ लागेको छैन । जहाँ सम्म स्वास्थ्य बीमाको कुरा छ, त्यो मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रका लागि गर्ने भनेकै हुँ । हरेक कुरा र विषय एउटा एउटा भूगोलले निर्दिष्ट गर्छ । स्वास्थ्य बीमा पनि मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल भित्र मात्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हुँ ।
–चुनाब जित्ने आधार चाँही के के हुन ?
०मैले अघि नै भनिसकें । मैले उधारोमा काम गरेको छैन ।बिकासका चिप्ला कुरा गरेको छैन । ३० हजार बिरामीलाई उपचारका माध्यमले जीवन दिएको छु । रोग पालेर बसेका बुबा आमा, दाजुभाइ , दिदी बहिनीहरूलाई निशुल्क आवासीय उपचार दिएको छु । यो सेवा आजका लागि मात्र होइन, सधैंका लागि हो । विपन्न वर्गका दलित जनजाति, आदिवासीका छोरा छोरीलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा पु¥याएको छु । बोलेको मात्र छैन , जनताको काम पनि गरेर देखाएको छु ।
०बाम गठबन्धनले चुनाव निश्चित घोषणा गरिरहेको छ नि ?
–उहाँहरू स्थानीय चुनावको अंक गणित क्यालकुलेटरमा हिसाव गरेर बरिरहनु भएको छ । हामी जन–जनको मनमा पुगेका छौं । कार्यकर्ता ३० प्रतिशत होलान ,बाँकी त मतदाता मात्र हुन् । स्वतन्त्र मतदाता कसैले डामेका साँढे जस्ता होइनन । बाम गठबन्धनले हाम्रो जीतलाई न रोक्न सक्छ, न छेक्न सक्छ । काठमाडौंमा घर भएका भानुभक्त ढकाल यहाँका लागि नयाँ हुन, तेह्रथुममा जनताले नपत्याएपछि उनी केपी ओलीको चेलो बनेर यहाँ आएका हुन । ढकाल हाम्रा पाहुना मात्रै हुन उनलाई मीठो मसिनो खुवाएर घर पठाउने हो । गठबन्धनका नाममा चुनाव जित्ने सपना २१ गते पछि पानीको फोको झैं फुट्ने छ ।
– तपाईलाई कर छलिको पनि आरोप छ नि ?
हेर्नुस , मैले गरेका कामबाट आरिस गर्नेहरू जल्नेहरूको आरोप हो,त्यो । मैले कर तिरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अडिट रिपोटले देखाउने हो ।एकाध ब्यक्तिले अखबारमा झुटो समाचार लेख्दैमा त्यो प्रमाणित हुन्न ।
०अन्तरघातको समस्या पनि छ कि ?
–छैन । सबै साथीहरू तन मन दिएर खट्नु भएको छ ।
०अन्त्यमा केही छुट्यो कि ?
–अहिले हामी चुनावी अभियानमा छौं । कांग्रेसले चुनाव जित्नेमा हामी ढुक्क छौं । हामी जीत नजिक पुगेकै कारण एमालले अनेक हर्कत गर्न थालेको छ । कहिले स्वास्थ्य शिविरमा ढुंगा मुडा गर्छन, कहिले विरामी बोकेको गाडीमा तोडफोड गर्छन । हुँदा हुँदा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता बीच मारामार हुन थालेको छ ।कांग्रसे अहिले विचारले मतदातको मन बदलिरहेको छ । हरेक दिन जसो दुई सय बढी एमाले माओवादी कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । यो लहरले गठबन्धन भित्र–भित्रै पागल झैं बनेको छ । हाम्रा नव प्रवेशी साथीहरू माथि आक्रमणको श्रृङ्खला सुरु भएको छ । किन कांग्रेसमा गइस भनेर धम्की दिन थालेका छन् । तर, कांग्रेसले धैर्यता प्रस्तुत गरिरहेको छ । किनकी कांग्रेसले २६ वर्ष पछि चारतारे झण्डा गाड्दै छ । सारा मतदाता कांग्रेसको पक्षमा उभिएका छन् । अब हाम्रो अविर जात्रा हुन मात्र बाँकी छ । बिचार राख्ने अबसर दिनु भएकोमा धन्यबाद ।